वाह ! यस्तो पो परिवार , बाबु-छोरा पाइलट आमा एयरहोस्टेज ! सम्मान स्वरुप सेयर गर्नुहोस – Jagaran Nepal
वाह ! यस्तो पो परिवार , बाबु-छोरा पाइलट आमा एयरहोस्टेज ! सम्मान स्वरुप सेयर गर्नुहोस
काठमान्डौ ,कोठाका भित्ताभरि दर्जन तस्बिर छन् । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सका सुरुवाती दिनदेखिकै जहाजका तस्बिरहरूले उनको कार्यकक्षको शोभा बढाएको छ ।तस्बिरमा भएकामध्ये कतिपय जहाज अहिले ‘फेज आउट’ भइसकेका छन्, कति चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थलमा ग्राउन्डेड अवस्थामा ‘घाम तापिरहेका’ छन् । उनको बाल्यकाल तिनै जहाज उडाउने पाइलट बन्ने सपनाका साथ बित्यो । जबकी अभिभावक चाहन्थे उनी डक्टर बनुन् । अभिभावकको इच्छा विपरित पाइलटका रूपमा उनले जहाज उडाउन थालेको पनि १२ वर्ष बितिसकेको छ ।
उनी अहिले नेपाल वायुसेवा निगमको पाइलट हुन् । यति मात्र होइन अपरेसन म्यानेजरका रूपमा निगमको नेतृत्व तहको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दै छन् । उनी हुन् दीपु जुहार्चन । सुन्धारास्थित नेपाल वायुसेवा निगमको चौथो तल्लामा रहेको उनको कार्यालयका भित्तामा सजिएका जहाजका फोटोबारे उनले भने, ‘ यो कोठामा पुरै हिस्ट्री छ’ । जहाजको ‘हिस्ट्री’ उनको कार्यकक्षका तस्बिरमा छँदैछ । तर निगमसँगै उनको परिवारको ‘हिस्ट्री’ पनि जोडिन्छ । दीपुको परिवार निगमको सुरुआती दिनसँगै यो क्षेत्रमा जोडिन पुगेका हुन् ।
बा र आमापछि अब दीपुले निगममा काम गर्न थालेको पनि जोड्ने हो भने आधा शताब्दी कट्छ । ६१ वर्ष पुगेको निगममा जुहार्चन परिवारको संलग्नता कूल मिलाएर ५६ वर्ष पुगिसक्यो । दीपुका बुबा क्याप्टेन यामप्रसाद जुहार्चनको २४ बर्ष, आमा सुमिली जुहार्चनको २० वर्ष र दीपुको १२ वर्ष गरी जुहार्चन परिवारले कूल ५६ वर्ष निगममार्फत् ‘राष्ट्रसेवा’ गरेको छ । तीनमध्ये बाबु यामप्रसाद र दीपु निगमका जहाज उडाउने क्याप्टेन हुन् भने आमा सुमिली एयर होस्टेस् ।मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोमबाट २ घण्टाको पैदल दुरीमा पर्छ एउटा सुन्दर बस्ती मार्फा ।
त्यहाँबाट राजधानी पुगेर पढ्ने पहिलो व्यक्ति थिए, यामप्रसाद जुहार्चन । सिद्धार्थ वनस्थलीबाट एसएलसी गरेपछि यमप्रसाद पाइलट तालिमका लागि अमेरिका गए ।बाबुले पाइलट बन्ने बाटो रोज्नु पछाडिको कारणबारे दीपु अनभिज्ञ छन् । अहिले हवाई र सडकमार्गले जोडिए पनि त्यतिबेला पोखराबाट म्याग्दीको बेनी हुँदै ३–४ दिन हिँडेर मार्फा पुग्नुपथ्र्ये। त्यसैले पनि हवाइ यात्राबाट यो दुरी छोट्याउने बुवाको रहर होला जस्तो लाग्छ दीपुलाई । आमा सुमिली भने धरानकी हुन् । लामो समयदेखि हस्पिटालिटी क्षेत्रमा कार्यरत उनी पनि पछि एयर होस्टेस भएर नेपाल वायुसेवा निगममा प्रवेश गरिन् ।
अर्थात यामप्रसाद निगममा पाइलट भए, सुमिली एयर होस्टेस भइन् । कहिले यामप्रसादले उडाएको जहाजमा सुमिली एयर होस्टेस हुन्थिन्, कहिले सुमिलीको ड्युटी परेको जहाज उडाउने पालो यामप्रसादको पर्थ्याे । मन न हो, एउटै संस्था (निगम) र उडानमा हुने लगातारको भेटले दुवैबीच प्रेम अङ्कुरायो । उनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिए । यामप्रसाद पाइलट हुँदा दीपु पोखरास्थित गण्डकी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढ्थे । आमाबाबु दुबैको व्यस्तताका कारण उनलाई होस्टेल राखिएको थियो । स्कुले जीवनमा भए पनि रेडियो र टेलिभिजनमा उनको मोह धेरै नै थियो ।
अनि, दशैँ बिदाका बेला बुबाले गर्ने पोखरा–जोमसोम उडानमार्फत् मार्फा फर्कन्थे ।कहिलेकाहीँ आमा सुमिली पनि ‘क्याबिन क्रु’ का रुपमा त्यही उडानमा हुन्थिन् । त्यही उडानमा ‘क्रु मेम्बर’ का रुपमा रहेका यामप्रसाद र सुमिलीका साथीहरुले दीपुलाई काखमा राख्थे । आमासँगै काम गरेका निगमका पुराना कर्मचारी भेट हुँदा बाल्यकालको ती यात्रा सम्झाइरहन्छन् । पढाईमा अब्बल भएर होला, बा–आमा उनलाई डाक्टर बनाउन चाहन्थे । त्यसबेला आर्थिक स्तर राम्रो भएकाहरू मात्र पाइलट पढ्छन् भन्ने सोच हावी थियो ।पढेलेखेका व्यक्तिको छनोटमा पाइलट तालिम खासै पर्दैनथ्यो ।
उनी चाहिँ पाइलट नै बन्नुपर्छ भन्ने इच्छा पालेर बसेका थिए । त्यो पनि बाबुजस्तै अमेरिकामै तालिम लिएर पाइलट बन्छु भन्ने निश्चय उनले गरिसकेका थिए । जब उनले सन् २००५ को जुलाईमा प्लस टु को पढाइ सके, त्यसपछि उनी पाइलट कोर्स पुरा गर्न अमेरिका जाने योजना बनाउन थाले । छोराको इच्छा विपरित एमबिबिएस पढाउन आमाबाले पनि कर गरेनन् । एक्लो सन्तान उनको मन राख्दिनैप-यो । तर, त्यही बेला ओसामा विन लादेन नेतृत्वको ‘अलकायदा’ ले ११ सेप्टेम्बर ९२००१० मा अमेरिकाको आर्थिक राजधानीको रुपमा चिनिएको न्यूयोर्कका ट्वीनटावरमा दुई जहाज ठोक्काएर आक्रमण ग¥यो ।
जसले गर्दा अमेरिकाले भिसा प्रक्रियामा कडाइ ग¥यो ।हतपति कसैको भिसा नलाग्ने समयमा पनि दीपुले आस मारेनन् । कसैगरी अमेरिका पुगिएन भने बा–आमाको इच्छा अनुसार मेडिकल साइन्स नै पढ्ने उनको इच्छा थियो । बिहानको समय उनी मेडिकल साइन्सका लागि ‘इन्ट्रान्स’ तयारी कक्षा लिन्थे भने दिउँसो सोह्रखुट्टेस्थित एउटा बालबच्चा हेरचार गर्ने गैरसरकारी संस्थामा काम गर्थे । उनको जिम्मेवारी थियो, संस्थामा रहेका बालबच्चालाई लुगा लगाइदिने, खाना खुवाइदिने, खेल खेलाउने । बच्चाहरुसँग त्यहीँ खाना खाएर उनी साँझ मात्र घर फर्कन्थे ।
उड्डयनको बजारमा उनीलगायतका युवा पाइलटहरू ‘हट केक’ जस्तै थिए । निगमले पाइलटका लागि आवेदन माग्यो, उनले परीक्षा दिए । ८र९ महिनामा नतिजा, आन्तरिक तालिम लगायतका सबै प्रक्रिया पुरा गरी निगमको पाइलट नियुक्त भए, सन् २००६ को अक्टोबरमा । र, सन् २००७ मा को—पाइलटको लाइसेन्स पनि पाए । सानोमा बुबाको काम देखेर नै यो पेशाप्रति आफू आशक्त भएको ठान्छन् उनी । र, उनको यो निर्णय विशेष किन पनि भयो भने, निगममा नियुक्तिपछि उनले जीवनको पहिलो फ्लाइट बुबा यामप्रसादसँगै गर्न पाए ।
सन् २००७ को अक्टोबरको महिना थियो त्यो । उनले डिएचसी ६र३०० कल साइन भएको जहाजमा थप ‘क्रु’ सदस्य भएर पहिलो पटक बुबासँग उडान भर्ने मौका पाएका थिए, त्यो पनि आफ्नै बाल्यकाल बितेको स्थान पोखरामा । बुबासँगको त्यो पहिलो उडानपछि प्लेन पोखरा विमानस्थलमा अवतरण ग¥यो । त्यहाँ आफन्तसँगको आत्मीय भेटघाट उनको मष्तिष्कमा अझै ताजै छ । त्यसपछि १५ जुन २०१८ ९१ असार २०७५० मा बुबा क्याप्टेन र आफू को पाइलट भएर उडान भर्ने मौका पाए । पछि को—पाइलटका रुपमा आमा–बुबासँगै एउटै जहाजमा रहेर उडान गर्ने मौका पनि पाए उनले ।
अझ परिवारका तीनै सदस्य जहाज बाहिर भेट हुन मुस्किलै हुन्छ । तर, आफूले रोजेको पेशा भएकाले उनले यो परिस्थितिलाई सहज रूपमा स्वीकारेका छन् । अविवाहित उनी आफ्नी जीवन संगिनी यो पेशाबारे समझदार होलिन् भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छैनन् । ‘जीवन साथी यही क्षेत्रको रोज्नुहुन्छ कि अरु नै पेशाको रु’ भन्ने प्रश्नमा उनी कुटनीतिक पारामा प्रस्तुत भए । ‘पारिवारिक जमघट, विवाह–भोज आदिमा चाहेर पनि समय निकाल्न सक्दैनौँ, यो समस्या यो पेशा बाहिरका मान्छेले सजिलै बुझ्छन् भन्ने छैन’ उनी मुसुक्क हाँसे । र, थपे, ‘त्यसैले, एभिएसन सेक्टरकै जीवनसाथी रोजौँ कि जस्तो लाग्छ ।’नया पत्रिका बाट